Tag Archive for "उपकरण" - यस्ता छन्, घरमा भईरहनु पर्ने जरुरी औषधी र उपकरण
♣ डा. महेन्द्रबहादुर विष्ट ♣ स्वास्थ्यसम्बन्धी सानातिना समस्या तत्काल उत्पन्न भईहाले चिकित्सक कहाँ पुगिहाल्न सम्भव हुँदैन र जरुरी पनि हुँदैन । तर ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ? यस्ता साधारण समस्यामा घरेलु ओखतीको निकै ठूलो महत्व हुन्छ र केही औषधीहरू यस्ता छन्, जो आफैंले चलाउन सक्ने ज्ञान राख्नु राम्रो हुन्छ । तर के हेक्का राख्नैपर्छ भने यस्ता औषधी चलाउने पूर्णज्ञान आफुसँग वा घरको कोही जान्नेबुझ... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चार उपकरणमा खराबी आएपछि प्रभावित भएको उडान सुचारु भएको छ । विमानस्थलका महाप्रवन्धक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार भीसीसीएस बिग्रिएकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने काम भइरहेको हो । क्षेत्रीले , ‘एरिया एप्रोचको पावर सप्लाईमा प्रबलमका कारण भीसीसीएस गएको हो । भीसीसीएस हामीसँग एक्स्ट्रा छ । इन्जिनियर साथीहरुले त्यो जोड्दै छन् ।’ भीसीसीएस बिग्रिएको कारण एक घण्... थप पढ्नुहोस्